Tolo-tanana: miantso fanampiana amin’ireo kandidà i Fanaiky | NewsMada
Tolo-tanana: miantso fanampiana amin’ireo kandidà i Fanaiky
Nivoaka ny hopitaly i Fanaiky, rehefa avy nanaraka fitsaboana nandritra ny roa volana. Raha tsiahivina, aretin’ny voa ny manjo azy, saingy rehefa natao ny fitiliana rehetra, hita fa misy tsentsina ao amin’ny fony ary marary ny masony. Nisaotra ireo rehetra nanolo-tanana, ho fanampiana tamin’ny fitsaboana azy, ity mpitendry gitara beso fanta-daza ity. Teo koa ireo mpitsabo sy ny tompon’andraikitra rehetra teny amin’ny hopitaly.
“Manodidina ny 30 tapitrisa Ar (150 tapitrisa FMG) ny vola voaangona tamin’ireo hetsika maro (teto an-toerana sy tany ivelany) sy ny fanampian’ny olon-tsotra, tonga teny amin’ny hopitaly. “Dialyse” miisa 10 no vita ary mbola mitohy mandra-pandeha any India”, hoy ny fanazavany.
Tsy vita hatreo anefa ny fitsaboana an’i Fanaiky fa tsy maintsy hitohy any India, toerana hanaovana ny fandidiana sy ny fanoloana ny “voa”, miaraka amin’ny fanalana ny tsentsina ao amin’ny fony ary ny fandidiana ny masony. Nampahafantariny, omaly, fa i Ny Ony, rahalahiny, no hanome ny voany iray hasolo ny an’i Fanaiky.
Mitotaly 35 000 dolara na manodidina ny 122 tapitrisa Ar ny vola ilaina amin’io fitsaboana any India io. Araka izany, tsy mbola ampy be dia be ny vola eo am-pelatanan’ny fianakaviana koa miangavy ireo malala-tanana izy ireo hanome izay foiny ho amin’izany. Miangavy manokana ireo mpanao politika, indrindra ireo kandidà amin’izao fifidianana filoham-pirenena izao, i Fanaiky hanampy azy amin’ny fandoavana ity saram-pitsaboana any India ity. Mbola nanantitra ny fisaorana ireo rehetra efa nahafoy ny fotoany, ny ainy, ny talentany, ny volany, sns, i Fanaiky.